दृष्टिविहीन ब्यक्तिहरुको सघर्षशील जीवनकथामा आधारित “मनका आँखा”सार्वजनिक
२० जना दृष्टिविहीन ब्यक्तिहरुको सघर्षशील जीवनकथामा आधारित “मनको आँखा” “पुस्तक सार्वजनिक भएको छ ।
इस्पाइनल कर्ड इञ्जुरी पुर्नस्थापना केन्द्र सागाका मेडिकल डाइरेक्टर डा. राजु ढकालबाट बिमोचित उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन योगेन्द्र पौडेलले गर्नु भएको थियो भने पुस्तकको समिक्षा डा. देवी नेपालले गर्नु भएको थियो ।
डा. नेपालले पुस्तकको समिक्षा गर्दै यो पुस्तक नेपाली समाजको मानसिक रुपान्तरणको कोशेढुङ्गा सावित हुने कुरा बताउनु भयो । मानसिक भ्रमका जञ्जिर फसेका आजका युवाजमातलाई यो पुस्तकले मार्गदर्शन गर्ने कुरामा जोड दिएको कुरा आफुले अनुभुत गरेको बताउनु भयो । त्यस्तै डा. राजु ढकालले यस्तो महत्वपूर्ण पुस्तकको विमोचन गर्न पाउँदा आफू गौरवान्वित भएको बताउनु भयो ।
यस पुस्तककी पात्र सृष्टि के.शी.ले मानिसले जनावरलाई माया गर्दा ऊ नजिकको हुन्छ । भने मानिसले मानिसलाई इज्जत र सम्मान दिए मात्र मानसिक रुपान्तर सम्भव हुने र आफू यस्तै अभियानमा लागेको बताइन् । यस कथाका लेखक कृष्णप्रसाद भण्डारीले शारीरिक अपाङ्गता आफैमा सफलताको बाधक होइन् । तर मानसिक अपाङ्गताले समाजलाई विकृत बनाउँछ । अरुलाई शोषण गरेर समाजमा प्रबुद्ध ठान्ने ब्यक्तिभन्दा अपाङ्गताको जीवन प्यारो लागेको बताउनु भयो ।
साङ्ग अपाङ्गता भएका दुबै बालबालिकाको शैक्षिक उन्नतिमा लागिरहने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताउनु भयो । चिरीमाया महर्जनको आफनो गिती एल्बमभित्रको एउटा गीत गाउनु भएको थियो ।
नेपाली विषयमा एम्.ए. र बी.ए. साथै काउन्सेलिङ मनोबिज्ञानमा पोष्टग्राजुयट गर्नु भएका कृष्णप्रसाद आफैँ हिवलचियर प्रयोगकर्ता हुन् । यस अघि उनले “बालबालिकालाई कसरी असल बनाउन” र “हिवलचियरको जिन्दगी” पुस्तक प्रकाशित गरी सकेका छन् ।